पार्टी बस - पार्टी रक्स काठमाडौंको नयाँ अनुभव :: शशि ढकाल :: Setopati
पार्टी बस - पार्टी रक्स काठमाडौंको नयाँ अनुभव
डेनमार्क, मंसिर २२
तपाईँ पार्टी गर्न कहाँ जानु हुन्छ?
क्लब, डिस्को कि बार?
सामान्यतया पार्टी गर्ने ठाउँ यिनै हुन्। अब भने पार्टी गर्नको लागि यी ठाउँ मात्रै धाउनु नपर्ने भएको छ। पार्टी बस नेपालले ठूलो ‘पार्टी बस’ सञ्चालनमा आएको छ।
‘सधैं कति रेष्टुरेन्ट वा पार्टी हलमा मात्र ह्याङ आउट गर्ने, यसो कतै घुम्दै, नाच्दै ह्याङ आउट गरौंन’ भनेर फरक अनुभव लिन चाहनेका पार्टीबस सुरू भएको हो।
नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई नयाँ अनुभव दिलाउन पार्टी बसको परिकल्पना गरिएको डेनमार्क निवासी अशोक शर्माले जानकारी दिए।
सन् २०१७ मा यसको अवधारणा डेनमार्कमै तयार गरि नेपालमा परिवहन व्यवसायमा अनुभव भएका अर्का प्रवन्धक उमेश प्रसाद सुवेदीको साथमा सन् २०२० मा भिजिट नेपाल २०२० लाइ लक्षित गरी यो बस सुरू गरेका थिए।
३६ जना सिट क्षमताको उक्त बसभित्र म्युजिक सिस्टम छ, बस्नका लागि सोफा राखिएको छ, आकर्षक ढंगले सजाइएको बार पनि छ । बसभित्रै प्रोफेसनल हाइफाइ डीजे म्युजिक सिस्टम छ, स्मोकिङका लागि छुट्टै क्याबिन छ, पोल डान्सका लागि छुट्टै ठाउँ छ भने मोबाइल चार्ज गर्नका लागि पनि सेवा छ साथै बस पूरै वातानुकूलित हुनेछ।
पार्टी बसमा अधिकांश सेलिब्रेटी र कलाकारले प्रयोग गरि मजा लुटिसकेका छन् भने यसमा निजी बुकिङ गरि विवाह, जन्मदिन पार्टी, एनिभर्सरी, ब्याचलर पार्टीजस्ता पार्टी मनाउँदै आइरहेका छन्
दैनिक बेलुका आठ बजेपछि रिङरोड र काठमाडौको भित्री भागमा होप एण्ड राइड हुनेगर्छ।
यसमा प्राय रिङरोड वरिपरि आफ्नो पायक पर्ने चोकमा जम्मा भई कल गरेर बस बुकिङ गर्न सक्छन्। बस रातको ८ बजे पछि चोक चोकमा पुगेर माग अनुसार पिकअप गर्दै फर्कन्छ। पार्टी सकिएपछि सोही ठाउँमा ल्याएर यात्रुलाई झारिदिन्छ।
ग्रुप भएर फोन गर्ने बाहेक विभिन्न रेष्टुरेन्टले आफ्ना ग्राहकलाई रेष्टुरेन्ट बन्द भएपछि बसमा चढाएर मनोरञ्जन दिने गरेका छन्।
कतिपय मानिसहरू भोज अथवा रेष्टुरेन्टमा खाना खाएपछि पनि पार्टी बसमा आएर रमाउने गरेका छन् ।
रेस नेपाल प्रालिले विदेशी शैलीको पार्टी बस नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर सुरू गरेको थियो।
त्यस्तै दैनिक बेलुका ८ बजेपछि रिङरोड र काठमाडौंको भित्री भागमा हप अन राइड हुने गर्छ। रेस नेपालका अनुसार यसले विभिन्न चार किसिमका हप अन पार्टी राइड, एयरपोर्ट पिक अप - ड्रप, निजी कार्यक्रम र विशेष थिम पार्टी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
यसको उद्धेश्य ग्राहकलाई लक्जरी र तनावमुक्त वातावरणको सिर्जनाका साथ उत्तम गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नु नै रहेको प्रबन्धक शर्माले बताए।
हप अन राइडमा प्रायः रिङ्ग रोड वरिपरि आफ्नो पायकपर्ने चोकमा जम्मा भई कल गरेर बस बुकिङ गर्न सकिने र रातको ८ बजेपछि चोक चोकमा चक्कर लगाउँदै माग अनुसार मानिसरहरू लिँदै नाँच गान गराउँदै पार्टी सकिएपछि सोहि ठाउँमा ल्याएर यात्रुलाई झारिदिने बस सेवाले जनाएको छ।
परिकल्पनाकार शर्माका अनुसार पार्टी बसमा समूह बनाएर आफ्नो आफ्नो थिम अनुसारको गर्नुमा यसको खास महत्व हुने गर्छ।
थीम अनुसारको पार्टीमा उपस्थित हुनु बेग्लै अनुभव हुन्छ । हालसम्म हेलोईन पार्टी, न्यु एयर पार्टी, क्रीसमस पार्टी, निवन लाईट थिम पार्टी लगायतका बर्थडे पार्टी, एनीभर्सरी, ब्याचुलर पार्टी, भीजा पार्टी, स्टाफ पार्टी हुने गरेको शर्मा बताउँछन्।
आफूले भनेको ठाउँबाट चढ्न पाउने र पार्टीपछि सोही ठाउँमा झर्न पाइने भएकोले घरबाट समूह भएर बाहिर निस्केर बसमा चढेर घर नजिकै झर्नेहरू धेरै नै बढेको सञ्चालक शर्मा बताउँछन्।
पछिल्लो पटक कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, बुढानिलकण्ठ क्षेत्रबाट धेरै बुकिङ आउने गरेको र यो बढ्दो क्रममा रहेको पनि शर्माले बताए।
बसमा किचन, बाथरूम तथा डिजेको समेत व्यवस्था छ। हिन्दी, नेपाली र अंग्रेजी गीत तथा आफ्नो इच्छा अनुसारका गीतहरु बजाउँदै, पिउँदै, रमाउदै गर्दा बेग्लै अनुभव हुने नियमित प्रयोगकर्ता योगेन्द्र लामिछानेले बताए।
पछिल्लो समय कलाकार बोलाएर लोक, पप साँझहरूसमेत हुने भएकाले यसको क्रेज बढेको सञ्चालक शर्माले बताए। उपत्यकाबाहिर पोखरा, चितवन र बुटवलमा बढी माग बढेको शर्माले बताए।
यसमा गैरआवासीय नेपाली, उद्यमी र पर्यटन उद्योगका अनुभवी व्यक्तिको लगानी रहेको छ। यो सेवाले पर्यटन प्रवर्द्धन तथा राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि मनोरञ्जनको सर्वोत्तम विकल्प हुने संस्थाको विश्वास रहेको छ।
पार्टी बसमा हाईफाई डिजे संगीत प्रणाली, सुविधा सम्पन्न बार, छुट्टै धुम्रपान क्याबिन, डान्स फ्लोर रहेको छ। कम्पनीले यस पार्टी बस प्रयोग गरे बापत विभिन्न शुल्क निर्धारण गरेको छ।
कति लाग्छ शुल्क
हप अन पार्टी राइड- प्रति व्यक्ति १ हजार रूपैयाँ
प्राइभेट पार्टीको ३ घण्टाको ३० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक घण्टाको १० हजार रुपैयाँ
६ घण्टाको प्राइभेट पार्टीको ४० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रतिघण्टा १० हजार रुपैयाँ
१२ घण्टाको प्राइभेट पार्टीको लागि ६० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रति घण्टा १० हजार रुपैयाँ।
एयरपोर्ट ल्याउन पुर्‍याउनको लागि ‘वान वे’को १५ हजार रुपैयाँ र ल्याउने र पुर्‍याउनको लागि दुई तर्फी २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
स्पेसल थिमको पार्टी प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २२, २०७८, ०४:१०:००
कोपनहेगन महानगरको निर्वाचनमा १ मतले न्यौपाने पराजित, पुनः मतगणनाको माग गर्दै निवेदन
नर्वेबाट नेपाललाई १० करोडको परियोजना
डेनमार्कमा पञ्चेबाजाको प्रवर्द्धन गर्न ८०० किमिको यात्रा